Sunday August 28, 2011 - 19:44:21 in Sheekooyin by Super Admin
Wiil magaciisa inoogu soo gaabiyay cabdi yare qaraabana la ah wiilka markii hore gabadha mehersaday ayaa waxa uu xariir la-soo sameeyay Wariya-yaasha Barnaamijka Xiisaha Badan ee Isha Dhacdooyinka Caalamka, kuwaa oo ka hawl-galla Shabakadda Warbaahin
Wiil magaciisa inoogu soo gaabiyay cabdi yare qaraabana la ah wiilka markii hore gabadha mehersaday ayaa waxa uu xariir la-soo sameeyay Wariya-yaasha Barnaamijka Xiisaha Badan ee Isha Dhacdooyinka Caalamka, kuwaa oo ka hawl-galla Shabakadda Warbaahinta ee Badweyn.com, waxa uuna hadalkiisa ku bilaabay sidaan soo socota. Wiilka markii hore gabadha guursaday waxa uu ahaa abtigey waxaana lagu magacaabi jiray (Maxamed) abtigey maxamed waxa uu ahaa nin iska dhalin yaro ah waxa uuna lahaa balwad dhanka qaadka ah, mana uusan aheyn dhalinyarada wax barashada xiiseeyda, waqtigiisana inta badan waxa uu ku qaadan jiray cunitaanka qaadka (jaadka).
Sidoo kale muusan aheyn dadka ku fakara mustaqbal iyo inuu nolol sameysto ee shilinkii soo galaba waa uu gubi jiray oo waxba meel muusan dhigan jirin,hase ahaatee waxaa si kadis ah hal mar isku badalay noloshii abtigey maxamed taas oo fajac iyo la yaab ku noqotay dhamaan qaraabada iyo dadkii xaafada nala daganaa is badalkaas oo ahaa mid si weyn looga dareemi karay abtigey.
Is badalkaasna waxaa sabab u ahaa kadib markii ay abtigey is barteen gabar daris nala aheed oo lagu magacaabi jiray (Fartuun).
Abtigey maxamed ayaa waxa uu jaceyl daran u qaaday gabadhaan fartuun oo daris nala aheed,kadib markuu u ban dhigay jaceylkii ayay waxey ku xujeyday inuu iska dhaafo cunitaanka jaadka uuna noqdo nin hormar iyo mustaqbal usoo jeeda, haduusan intaas sameyna aysan waxba ka aqbaley.
Maxamed iyo fartuun markey intaas is dhaafsadeen ayaa abti maxamed waxaa laga dareemay isbadal weyn kaas oo ahaa inuu iska dhaafay cunitaanka jaadkii sidoo kale waxaa la yaab noqotay inuu maxamed iska badalay dhamaan ilkihii uga halaabay cunitaanka jaadka.
Markuu in muddo ah socday xariirka Fartuun iyo maxmed ayaa waxey isku af garteen iney aqal galaan oo ay aroos dhigtaan.
Maxamed intaas kadib wuxuu dhex galay tolkiisa waxa uuna u ban dhigay arintaan arooska ah waana laga aqbalay,waliba waxaa loo ballan qaaday-
In loo abuuri doono ganacsi si uu u dabaro nolosha qoyskiisa.
Maalmo kadiba ayaa sida caadada iyo dhaqanka u ah ummada Somaaliyeed diinteena sharafta baddana ay qabto ayaa reerkii uu ka dhashay maxamed-
Waxa ay u dooneen gabadhii fartuun aheed intaa ka dibna reerkii ay ka dhalatay fartuun wey aqbaleen weyna bixiyeen gabadhii fartuun aheed.
Waxaana halkaas ka dhacay Meherkii maxamed iyo fartuun waxaana lagu balamay muddo bil kadib ah inuu dhaco arooska.
Maxamed ayaa waxa uu u tafo xeytay sidii uu usoo diyaarin lahaa aqalkii iyo lacagtii ku bixi laheed arooskiisa waxa uuna dhex galay reerkiisii
Kuwaas oo isku daray qarashkii ku bixi lahaa arooska iyo wixii la cuni lahaa maalinka arooska uu dhacayo Maxamed ayaa waxa uu soo diyaarsaday aqalkii la dagi lahaa kaas oo iskugu jiray jiif iyo fadhi.
Balse waxaa la yaab iyo amakaag ku noqotay maxamed iyo dadkii qaraabadiisa ahaa iyo waliba dariskii daganaa xaafada in halmar la waayay dhamaan qoyskii ay ka dhalatay fartuun oo xaafada is kaga guuray,waxaana la sheegay iney u guureen gobol ka mid ah gobolada Somalia, waxaana maxamed lagu yiri “is daji niyadana qeyr u sheeg wax walba waa hagaayaaan” ku dhawaad labo bilood markii ay kasoo wareegtay guuritaankii qoyskii ay ka dhalatay fartuun ayaa waxaa laga war helay iney fartuun wiil kale ku guursatay gobolkii ay u guurtay, maxamed ayaa waxa uu isku dayay inuu aado gobolka ay u guureen qoyska fartuun balse cidiisa ayaa kula talisay inuusan aadin sababtoo ah waxaa macquul ah iney nafsadiisa halis gasho waxaana lagu yiri “Allah talo saaro isagaa talo ku filane” . intaa kadib maxamed waxa uu iska soo aaday dalka Kenya waxa uuna halkaas ka gatay leen yurub ah waxaana u suurta gashay inuu gaaro dalka Sweden.
Muddo 5 sano ah kadib ayaa waxaa laga war helay in gabadhii fartuun aheed ay dhashay 5 caruur ah kuwaas oo dhamaantood wada geeriyooday ninkii guursadayna uu furay iyadiina uu ku dhacay cudur aan magaciisa iyo daawadiisaba la aqoon ilaa maantana ay la xanuunsan tahay ,waxeyna ku nooshahay nolol geeri iyo dhimasho u dhaxeyda